Tag: redirects | Martech Zone
Wenezdee, Machị 24, 2021 Tọzdee, Machị 25, 2021 Douglas Karr
Mgbe ị rịọrọ maka adreesị na ihe nchọgharị, usoro ihe omume na-eme n'okwu nke microseconds: You pịnyere adreesị na http ma ọ bụ https wee pịa tinye. The http na-anọchi anya hypertext mbufe protocol na-agagharị na ngalaba aha ihe nkesa na-. Https bụ njikọ dị nchebe ebe onye nnabata na ihe nchọgharị na-eme aka na izipu data ezoro ezo. Ihe nkesa aha ngalaba ahụ na-ele anya ebe ngalaba na-atụ aka
Ọrụ nyocha na-abụkarị, ọ dị nwute, mgbe ọ bụla ụlọ ọrụ na-emepe mkpọsa, nyochaa nsuso njikọ njikọta, ma ọ bụ ịtụgharị ntụgharị. Enweghi ịdọ aka ná ntị na ịzụlite na njikọta njikọ nwere ike ime ka ọtụtụ nsogbu dị na ala nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịtụle arụmọrụ na-ajụ ndị ahịa na ọwa. ClickMeter bụ ikpo okwu gbakwunyere na API nwere njikọ nke na-enyere ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ndị mgbasa ozi, na ndị mbipụta akwụkwọ aka iwulite usoro gburugburu mmejuputa na ịlele njikọ njikọ pịa-site.
Broshọ na saịtị ecommerce na-arụ ọrụ yana ọdịnaya nke oge a dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Ikike iji melite saịtị gị ejedebeghị na mgbanwe ọdịnaya, ọ bụkwa ịga n'ihu na-eme ka ibe akwụkwọ kachasị mma maka ọchụchọ, mkpanaka, na ntụgharị. N'oge a, ọ bụ ihe ịtụnanya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị ahịa ga-akpọtụrụ ngalaba IT ha iji mee mgbanwe dị mkpa na weebụsaịtị ha kwa izu - mana ọ bụ eziokwu. Ayima mara ọkwa na